हालै बारेमा यो अचम्मको उत्पादन मात्र कोमल प्राच्य सुंदरियों जानिन्छ, र अब सबै युरोपेली देशहरूमा जो argan तेल समावेश कस्मेटिक उत्पादन, प्रयोग मा एक वास्तविक उछाल अनुभव छन्। यो तरल सुन, जादू बुलेट भनिन्छ। यो चापलूसी तुलना के जितेको छ र त सुन्दरता उद्योग अनुयायी को ध्यान आकर्षित?
को खुट्टा मा, केवल मोरक्को बढ्छ जो Argan - Argan तेल आशुक्रोधी nondescript yellowish काठ को फल देखि झिकिएको छ एटलस पहाड। फल pomace तेल गर्न विधानसभा देखि सारा प्रक्रिया ठाउँ स्वाभाविक मूल्य असर गर्छ जो, हात द्वारा विशेष लाग्छ। सिर्फ एक वर्ष तेल को 12 लाख एक सानो भन्दा बढी लिटर गरे -। यो धेरै सानो छ (तुलना, जैतून र सूर्यमुखी तेल लागि -3र9अर्ब टन क्रमशः)।
Argan तेल - गुण
पुरातन Phoenicians यो अचम्मको उपकरण पत्ता र खाना पकाउने मा मात्र होइन तर पनि बल्न र बाल सौन्दर्य देखि घाउ निको, सुरक्षाको लागि प्रयोग गर्न सुरु गर्न। र Berbers विश्वास argan तेल सबै छाला समस्याको लागि एक सार्वभौमिक उपाय छ।
1) छाला को हेरविचार: प्राकृतिक लिपिड आवरण संरक्षण हानिकारक बाह्य प्रभावको देखि कोमल र प्रभावकारी सुरक्षा। भिटामिन ई तेल को उच्च सामग्री उल्लेखनीय एंटीओक्सिडेंट बनाउँछ र असंतृप्त फैटी एसिड राम्रो मिलेका र छाला soothe छन्। Argan तेल एक चिल्लो लागेको अवशेषहरु छोड्न गर्दैन र पूर्ण जो अन्य तेल देखि यो distinguishes, अवशोषित छ।
2) कायाकल्प प्रभाव: अद्वितीय घटक झुर्रियाँ को प्रभाव अन्तर्गत प्राकृतिक तरिका मिलेका छन्, र छाला अनुबंधित छैन। सेल अवस्था तिनीहरूले सक्रिय अद्यावधिक गर्न सुरु, noticeably सुधार गर्छ। तसर्थ, छाला उल्लेखनीय, लोचदार चिल्लो र तरुण छ।
3) तेल छाला लागि: संग linoleic एसिड, argan तेल रक्त कोलेस्ट्रल को स्तर कम गर्न मद्दत गर्छ। एक phytosterols अत्यन्तै प्रभावकारी ओठ र नङ, घाउ र abrasions मा जला चिह्न, scars, चर्किएको निको।
4) रोगहरु को रोकथाम: यो खान नियमित सिफारिस गरिएको छ त्यसैले तेल, monounsaturated र polyunsaturated फैटी एसिड को धेरै समावेश argan मा। तपाईं हृदय रोग र rheumatism को लक्षण कम गर्न सक्छन्, मस्तिष्क रक्त प्रवाह, पाचन पर्चा र कलेजो को सर्त सुधार गर्न।
5) Argan तेल बाल: बाल हानि र सुक्खा कपाल लागि अत्यन्तै प्रभावकारी उपाय, खण्ड समाप्त हुन्छ। यो कपाल प्राकृतिक चम्कने र कम बोसो स्वस्थ राम्रो-groomed उपस्थिति दिन्छ।
6) नङ cooldown, को नङ प्लेट बलियो delamination र नङ को टूटना, cuticle hydrates रोक्छ।
प्रयोग argan तेल विधिहरू
यो उत्पादन क्रीम र मास्क थपिएको छ छाला, रंग लागि बाल, उत्पादनहरु कपाल को हेरविचार लागि। यसलाई शुद्ध फारम प्रयोग र अन्य तेल संग मिश्रित गर्न सकिन्छ। बराबर भागहरु को मिश्रण तेल र Shea घिउ वा argan र thistles argan - उदाहरणका लागि, कपाल झर्ने, बलियो र चमकदार बन्न, राम्रो तरिकाले उपयुक्त मास्क रोकियो।
छाला हेरविचार को लागि सबै भन्दा प्रभावकारी परिपत्र गति मा massaging, नुहाउनु वा स्नान पछि argan तेल लागू गरियो। यसलाई चाँडै र सजिलै अवशोषित हुन्छ, र सकारात्मक परिवर्तन लगभग तुरुन्त देख्न सकिन्छ। धेरै यस्ता प्रक्रियाहरु youthfulness पछि, लोच र मखमली छाला बस प्रत्याभूति।
र argan तेल संसारको सबैभन्दा महंगा तरकारी उत्पादन मध्ये एक मानिन्छ, जबकि, र यसको मूल्य प्रति लीटर 80 यूरो पुग्छ, यो बिल्कुल लगानीको लायक छ। सौन्दर्य यस्तो प्रभावकारी लगानी एक आश्चर्यजनक छिटो र लगातार परिणाम ल्याउँछ। शरीर सुधार गर्न चाहनुहुन्छ, यो prettier ठूलो, आफ्नो साथीहरू एक अद्भुत उपस्थिति चकित गर्नुपर्छ? त्यसपछि संकोच छैन: तपाईं त्यहाँ argan तेल छ जो कुनै पनि कस्मेटिक्स भेट्नुपर्छ हुनेछ।
समीक्षा, तरिका, नतिजा: बाल चम्किलो
बाल लागि Clarifier प्रयोग मा सावधानी आवश्यक
कपाल डाई हाउते Couture
अनाज बर्गर: नुस्खा
"पोटासियम orotate": आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नो हात मा छ
रूसी आणविक उद्योग: उद्योग, मुख्य दिशा र कार्यहरू
भूल को मनोविज्ञान के छ? अवधारणा, कारण, रोकथाम
टिभी श्रृंखला "क्यासल": अभिनेताहरु र षड्यन्त्र
Borderlands2कसरी खेल्ने Tunngle मार्फत। Borderlands2कसरी प्ले गर्न समुद्री मा
मल्टिमिडिया प्रदर्शनी "बैठक क्यानभास। Aivazovsky र समुद्री चित्रकारों "
स्टेटजोन्स wort को उपयोगी गुणहरू
Chak Palanik। "Guts"